आधारात्मक बाइबल शब्दावली भाग ३ – Word of Truth, Nepal
“नयाँ जन्म” / “नयाँ सृष्टि” (REGENERATION)
“पवित्र” को माने के हो?
“पवित्र” को आधारभूत माने परमेश्वरको उद्देश्यका लागि अलग गरिएको भन्ने हो (लेवी २०:२६)।
मानिसहरू बाहेक अरू कुराहरूलाई पनि “पवित्र” भनेर उल्लेख छ: भूमि (प्रस्थान ३:५), विश्राम दिन (प्रस्थान १६:२३), हारूनका वस्त्रहरू (प्रस्थान २८:२), भेट हुने पालको वेदी (प्रस्थान २९:३७)। तसर्थ, पवित्र पार्नु भनेको शुद्ध पार्नु वा धर्मी बनाउनु नै भन्ने अर्थ सधैं नलाग्न सक्छ। हारूनका वस्त्रहरू आफैमा शुद्ध वा पापरहित थिएनन्। ती केवल परमेश्वरको सेवाका निम्ति अलग गरिएका थिए। पोथ्रामा परमेश्वरको उपस्थिति आउँदा र मोशाले आफ्‍ना जुत्ता फुकाल्दा, मोशा उभिएको पवित्र भूमि पाप हटाइएको अर्थमा शुद्ध पारिएको थियो भन्ने त होइन। उक्त भूमि परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा उहाँको उद्देश्यका लागि अलग पारिएको थियो।
ख्रीष्टिय जीवनमा पवित्रताका दुई पक्ष छन् — ओहोदाको (positional) र अवस्थाको अर्थात् व्यावहारिक(practical)। एकातिर त्यहाँ अनन्तताको पवित्रता छ, अर्कोतिर समयको; एकातिर सिद्ध, अर्कोतिर क्रमिक; एकातिर पूर्ण, अर्कोतिर प्रगतिशील। एक ख्रीष्टियन एकातिर ख्रीष्टमा भएको उसको अनन्त ओहोदाको कारण पवित्र छ, र अर्कोतिर व्यावहारिक अर्थमा दिन प्रति दिन ऊ पवित्र हुँदै जाँदैछ।
पवित्रताका यी दुई पक्षलाई कलस्सी ३:१२ मा देख्‍न सकिन्छ। विश्वासीहरू ख्रीष्टमा भएको ओहोदामा पवित्र र प्रिय भएका हुनाले उनीहरू दैनिक जीवनमा पवित्र हुनुपर्छ। हामी पवित्र जनहरू भएकाले हामी पवित्र जनहरू जस्तै जिउनुपर्छ। हरेक साँचो ख्रीष्टियन ख्रीष्टको रगतमाथिको उसको भरोसाले परमेश्वरको सामु ऊ सिद्ध र पवित्र छ — येशू जत्तिकै पवित्र — तर हरेक ख्रीष्टियन दैनिक रूपमा पवित्र जीवन जिउने गर्दैन। ख्रीष्टियनले आफ्‍नो पवित्रतालाई सिद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ (२ कोरिन्थी ७:१)। यसले ख्रीष्टिय जीवनको आत्मिक वृद्धिको प्रक्रियालाई बयान गर्दछ।
बाइबलले पवित्रता र ख्रीष्टको रगतको बीच घनिष्ट सम्बन्ध भएको देखाउँछ (हिब्रू ९:१२,२०-२५)। भेट हुने पालका प्रतीकहरूले यस कुरालाई जोड दिन्थे। भेट हुने पालका सामग्रीहरू परमेश्वरको सामु रगतद्वारा पवित्र पारिन्थे (प्रस्थान ३०:१०)। पूजाहारीहरू रगतद्वारा समपर्ण गरिन्थे (लेवी १४:१४)। उपासकहरू रगतद्वारा शुद्ध पारिन्थे (लेवी ४:१५-१८,३०,३४)। महापूजाहारी पवित्र स्थानभित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सक्नुको र मानिसहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्न सक्नुको कारण रगत नै थियो (लेवी १६:१४-२०)। लेवीको पुस्तकमा “रगत” शब्द ६० पटक उल्लेख भएको छ जुन पुस्तक इस्राएलले गर्ने परमेश्वरको उपासनाको र बलिदानद्वारा हुने शुद्धिकरणको पुस्तक हो। हिब्रूको पुस्तकमा “रगत” शब्द २० पटक उल्लेख भएको छ जसले देखाउँछ कि पुरानो नियमका प्रतीकहरूले सङ्केत गरेको कुरा चाहिँ ख्रीष्टको रगत हो।
“मिलाप” को माने के हो?
रोमी ४:६-९ मा “ठहराउनु” र ४:२२-२५ मा “गनियो” को माने के हो?
“धर्मपुत्र ग्रहण” को माने के हो?
“नयाँ जन्म” वा “नयाँ सृष्टि” के हो?
“पवित्र” हुनुको आधारभूत माने के हो?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 19:12:492020-11-13 16:11:37आधारात्मक बाइबल शब्दावली भाग ३
आधारात्मक बाइबल शब्दावली २आधारात्मक बाइबल शब्दावली भाग...